မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 14 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
Storekeeper main responsibility is to execute the warehouse operation such as offloading, segregation, receiving, put away, picking, packing, loading of shipments and preparing necessary documents.
လွန်ခဲ့သော2နာရီ က
Coordinator, Supply Chain Management
The Supply chain management coordinator needs to support shipping documents, shipment process, and customs clearance, and inventory inbound in SAP and future documents administration.
Logistics Procurement Manager (#hh)
ရန်ကုန် | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 1,500,000 - 2,000,000
Reporting to the Chief Business Officer (CBO) and Chief Operating Officer (COO) the Logistics Procurement Manager will directly manage and develop the Procurement Team. The role is mainly responsible for the collection, assessment and comparison of supply chain costs including transport, customs clearance, warehousing for our clients.
Procurement Assistant (Hlaing Thar Yar)
Assist the procurement process of Rice
Myanmar Shining Star Distribution Co.,Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
Store Supervisor (Construction Material)
Store Supervisor for Construction Material.
Junior Data Entry Staff (Custom & Formalities)
As Junior Data Entry monitor for weight bridge system , issued invoice (Dry Port Challan) , issued weight slip and collects & save documents , scans document .
Procurement Executive (Local)
Procurement for Construction Material.
Myanmar Shining Star Distribution Company တွင် Warehouse Executive ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ခေါ်ယူခြင်း
ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ 14
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း2မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း 1 ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း2ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း2ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း2သတ္တုတူးဖော်ရေး ၊စွမ်းအင် နှင့် သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း 1 လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း2သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 2
မန္တလေး3ရန်ကုန် 11